China Ady an'i Chosin Reservior Copyright sy Investment | Galaxy Galaxy
Adin'i Chosin Reservior
Toetra fampiasam-bola: Eo an-dàlana
Foto-kevitra: tantara an-tsehatra, tantara, ady
Fandaharana horonantsary: ​​2021-10
Tamin'ny ririnin'ny taona 1950 dia nisy ady feno rà nifanaovan'i Etazonia sy i Shina tany amin'ny faritry ny farihin'i Changjin, izay nandroaka ny tafika tranainy indrindra tao amin'ny ady - ny Corps 9 an'ny Volontaire People's People, ny fizarana 1 an-dranomasina sy ny diviziona faha-7.
Kaige Chen / Ilay Emperora Farany （1988） ， Legend of the Demon Cat （2017） ， My People ， My Country （2019）, totalin'ny boxe 5,68 miliara
Hark Tsui / Mermaid （2016） ， Dia mankany Andrefana: Mitokona ny demonia （2017） ， The Taking of Tiger Mountain （2014）, totalin'ny boxe 10.82 miliara
Dante Lam / Operation Sea Red （2018） ， Operation Mekong （2016） ， Fight Back to School （1991）, totalin'ny boxe 5,97 miliara.
Jing Wu / Wolf Warrior 2 （2017） ， Ilay Tany Mandehandeha （2019） ， Hiran'ny Tanora （2019）, totalin'ny boaty 24,51 miliara.
Jackson Yee / Andro tsara kokoa （2019） ， Ny Andro lava indrindra any Chang'an （2019） Voninkazo Mena kely （2020), totalin'ny boxe 4,09 miliara.
Jerry Lee / Breakup Budies （2014） ， Aftershock （2010） ， Tsy Jamba ny fitiavana （2011）, totalin'ny boxe 122.27 亿
Hanyu Zhang / Operation Sea Red （2018） ， Operation Mekong （2016） ， Ny kapiteny （2019）, totalin'ny boaty 16,44 miliara
Tale telo, Chen Kaige, Tsui Hark ary Lam Chiu-Hsien, no niditra tamin'ny sarimihetsika Battle of Chosin Reservior. Na iza na iza amin'ireo direktera ireo dia mety ho nanao blockbuster ady mitovy habe aminy, avelao hiaraka ny talen'ny mpitantana telo.
Zhang Hanyu, Wu Jing, Zhang Yi, Jackson, Li Chen ary olon-kafa no hanatevin-daharana an'io blockbuster ady io, ny filaharana toy izany dia mendrika an'ity famatsiam-bola goavana ity, ny talen'ny mpitarika sy ny mpilalao voalohany dia fanalam-baraka be.
Mikasika ny "Farihin'i Snow sy Ice Changjin", nanambara ihany koa i Yu Dong ilay cinematographer an'ilay sarimihetsika.
Luo Pan dia mpaka sary an'ny Youth and The Sacrificeis, haingon-tsary hosodoko amin'ny fitenin'olomailala, ny tena fisehoana an-tariby misy ny ady, no fahaizany manokana.
Pow, ilay cinematographer nandresen'i Oscar an'i Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon dia manana solomaso manankarena sy malefaka.
2020 Ny boaty valo Valo hetsy3,11 miliara
2021 Ny biraon'ny sorona Sorona 1,12 miliara
Biraon'ny boaty Operation Red Sea 2018 3,65 miliara
Fotoana famoahana: 2021-10
Biraon'ny boaty andrasana
Teo aloha: Mpangalatra tigra
Manaraka: Ny fahasambarana dia toy ny ranona
Thriller Hollywood Best
Hollywood Thriller Mystery Movie
Horonantsary vaovao futuristic
Sarimihetsika Thriller Disaster
Mahatsiaro Mpamono olona Mistery
F9 Ilay Saga faingana